Daawo R/wasaaraha Itoobiya: Anaga oo Aan Fasax ka qaadan DF-Somalia lama hadleyno madaxda maamulada (Video) - Hablaha Media Network
Daawo R/wasaaraha Itoobiya: Anaga oo Aan Fasax ka qaadan DF-Somalia lama hadleyno madaxda maamulada (Video)
HMN:- Madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqday dhawaan dalka Itoobiya halkaas oo uu kulan xasaasi ah kula qaatay Ra’isulwasaaraha Soomaaliya H.E. Hailemariam Dessalegn, wuxuuna kulankaas ahaa midkii ugu horeeyey ee dhex mara labada Mas’uul.
Haddaba labada Mas’uul ayaa markii ay wada hadleyn waxay saxaafadda la wadaageen qodobadii ay ku heshiiyeen, Caasimadda online ayaana xoogga saartay inay waxyaabihii ay labada Mas’uul saxaafadda u sheegeen kasoo qaadato qodobadii ugu muhiimsanaa, waxaana idinkaga soo dhignay Af­Soomaali , maadaama war saxaafadeedka ahaa mid ku baxay luuqadda Ingiriiska.
Qodobada aan warbixintaan uga hadli doono waa Hailemariam oo sheegay inaysan maamul Goboleedyada la hadli doonin iyagoo aan wax fasax ah ka heysan dowladda dhexe, waxaadna qodobkaas ka daawan kartaa muuqaalka hoose, gaar ahaan daqiidda 14: 45 – 16­30.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA SHIRKA JARAA’ID
“Anaga Dowlad Goboleedyada iskalama hadli jirin ee waxaan fasax ka heysanay dowladdii hore ee federaalka, marka anaga si toos ah ulama hadli jirin ayaga, dowladii hore ayaan weydiisan jirna fasax” ayuu yiri Hailemariam.
“ Sidaa darteed fasax la’aanta dowladda federaalka, Itoobiya iyo dal kaleba ma ahan marnaba inay fara geliyaan soomaaliya. anaga xitaa federaal ayaa nahay mana ogolin in dal kale dowladaha federaalka uu la hadlo, anaga oo aan fasaxin, marka anagana sidaas dal kale kuma sameyn karno” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey.